Miyaan awoodaa in aan mashruucdayda internetka ku sii wado si aan ugu guuleysto hannaanka raadinta raadinta ee magaca domainka ee UK?
Maalmahan, waxaa jira fikrad aad u fara badan oo ku saabsan internetka oo ku saabsan awooda sare ee magac domain ee UK. Dhab ahaan, oo horseeday raadinta moobiilka raadinta UK oo ku salaysan cinwaannada internetka ee bilowga internetka ayaa loo tixgeliyaa hadda qaabka ugu dambeeyay. Waa hagaag, badankood waxay maqleen ururo badan oo magac leh oo magacooda lagu qeexay oo keenay guusha magaca domain gaar ah.
Waa hagaag, waa in aan qiranno - qaabaynta xeeladaha suuq-geynta ayaa ah waxa ugu horreeya ee la sameeyo inta lagu jiro bilowga bilawga ah ee suurtogalka ah mashruuc ganacsi oo online ah. Oo xulashada magaca domain kordhinta saxda ah waa laf-dhabarka qorshaha suuq-geynta. Qaabkaas, u soco raadinta mashiinka raadinta adoo hoos imanaya domainka UK, tusaale ahaan, waxay noqon laheyd go'aanka muhiimka ah ee uu ganacsiga oo dhan ka gooyey oo kaliya oo uusan ku dhicin joogitaankeeda internetka ee shabakada, laakiin dejinta barta bilawga ee guusha brandka, iyo siinta iftiin cagaaran oo ku nool dad badan oo nool oo ku riixaya gadaal dhinaca dambe ah oo horseedi kara boggaga internetka - umzugsservice telekom.
Waxaad sidoo kale i weydiin kartaa su'aal macquul macquul ah - ka dib oo dhan, sababta aan u soo qaadan magaca magac domain ugu caansan COM? Wax walba waa wax sahlan, maaddaama aagga isku-celinta COM ay noqoto meel aad u badan oo loogu talagalay guuritaan buuxa. Sidoo kale, maskaxda ku hay, in haysashada mihnada saxda ah ee raadinta ee hoos imaanaya UK waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo ah in ganacsi laga sameeyo degmo ahaan. Ka dib oo dhan, waxaan doonayaa in aan tixraaco cilmi-baariskii ugu dambeeyay ee Nominet, aasaasaha warshadaha ee magaca domain name ee UK iyo masuul ka ah aaggan gaarka ah ee gudaha interneetka caalami ah. Sidaa daraadeed, halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah xaqiiqooyin dheeraad ah iyo macluumaad dheeraad ah oo ay taageeraan dhowr lambarrada tirakoobka, laga soo eegayo aragtida sugitaanka mashiinka raadinta ee hoosta cinwaanka magac domain ee UK:
Marka loo barbar dhigo bogag kasta oo kale, boggaan dhammaada. Ingiriisku badiyaa waxay helayaan kalsooni iyo awood badan oo ka dhexeeya dadka isticmaala;
Dot UK magac kordhinta ayaa leh fursado badan oo lagu beddeli karo si aad u kala doorto, marka ganacsigaaga la qaado tallaabo buuxa oo ah heer degaan (taas oo macnaheedu yahay inaad si buuxda u xor u noqon karto inaad soo qaadato qaar ka mid ah kuwa ugu Meelaha caanka ah sida co. uk, org. Uk, aniga. ukun ama mar dambe u adeegso sida ugu cadcad shakhsi ahaaneed, tusaale ahaan inaad martigeliso boggaaga cusub ee mustaqbalka fog);
Magaca domainka ee soo gala. UK waxay bixisaa dhalashada website-ka ururka, waxay taageertaa bilaabitaanka ganacsiga, ama waxaa lagu qorayaa diiwaanka shakhsiyeed - mid ka mid ah kuwan ayaa la ogaanayaa waqti dheeraad ah oo leh 5-ilbiriqsi kasta;
Oo halkan soo socda ayaa qayb ka ah wararka dhabta ah ee loogu talagalay ganacsatada internetka ee ganacsigooda internetka ku jira, oo ay si gaar ah ugu shaqeeyaan iibinta badeecadaha ama adeegyada. Sida laga soo xigtay sahan dhawaan la sameeyay Nominet, waxaa jira in ka badan 70% iibsiyada weyn ee maxaliga ah ee soo maraya magaca domainka UK ee kordhinta.